3 Siyaabood oo aad Daganaan ugu Heli Karto CBD Mudada COVID-19 Faafida • Dawooyinka Inc.eu
Cabsida iyo walbahaarka - laga bilaabo shirkadaha xiran ilaa shaqo la'aanta - ee ay sababtay dhibaatada coronavirus aad ayey u weyn tahay. Iyada oo cudurka faafa ee 'Covid-19' uu nagu haayo cidhifka kuraastayada, dad badan ayaa waydiinaya waxa ay samayn karaan si ay u dejiyaan. Sidee kula deggenaataa adiga CBD?
1 CBD la cuni karo si looga ilaaliyo dareenka walaaca leh
2 Saliidaha CBD si loola dagaallamo walwalka
3 CBD uumi baxa daaweynta walwalka
4 Ugu dambeyntii
Ma ahan wax qarsoodi ah taas cannabidiol (CBD) - isku-darka kiimikada ee laga helo dhirta hemp - wuxuu yareyn karaa walwalka iyo walbahaarka. Waxaa jira daraasado badan oo cadeynaya sheegashadan, waxa ugu fiican ayaa ah in CBD aysan sababi karin waxyeellooyin ka dib marka la cuno, taas oo ka duwan daawooyinka dhaqtarka ee walwalka.
Maanta, alaabada CBD waxaa laga heli karaa qaabab badan. Halkan waxaa ah seddex siyaabood oo aad ugu deganaan karto una isticmaali karto CBD si loo yareeyo walwalkaaga iyo walbahaarkaaga.
CBD la cuni karo si looga ilaaliyo dareenka walaaca leh
Dariiq caan ah oo lagu cuno CBD waa cunista waxyaabaha xashiishka ku jira ama cunnooyinka la cuni karo. Tusaale ahaan, waxaa jira nacnac iyo gummaysyo ka kooban CBD oo ku yimaada dhadhan kala duwan. Waxaad qaadan kartaa laba illaa saddex ka mid ah cunnooyinkaas maalintii iyo mar kale ka hor intaadan seexan habeenkii. Marka lagu daro inaad ku xasiliso CBD, cannabidiol wuxuu kaloo daaweyn karaa calaamadaha hurdo la'aanta.
CBD Cunnooyinka Si Looga Fogeeyo Dareenada Walaaca Leh (afb)
Waxa ugu fiican ee ku saabsan waxyaabaha la cuno ee CBD waa sahlanaanta qaadashadooda. Dadka qaarkiis wali way ka warwareegaan inay isdajiyaan CBD una istcimaal sababo laxiriira sawirka xun ee laxiriira inuu yahay iskudhis kiimiko ah lagasoosaaray dhirta xashiishka sida marijuana. Markaad isticmaashid waxyaalaha la cuni karo ee CBD, uma ekaysid nin dawo leh, iyaguna sidoo kale waxay leeyihiin qiyaas joogto ah.
Isticmaalidda dhibcaha saliidda ee CBD waxay sababi kartaa dadka qaarkood inay ku xukumaan, laakiin cidina kaa yeeli mayso inay xumaan kuu muuqato haddii aad ku cunto calool-xumada CBD dad badan hortooda. Xitaa shaqada, waad cuni kartaa waxyaabaha la cuno ee CBD adigoon qof walba ka helin go'aan xun.
Dhamaanteen waan ognahay in cabsidu kasii darayso markaad u malaynaysid inay dadku ku xukumayaan. Markaa cunitaanka kuwan la cuno ee cannabidiol-ka ah waxay noqon kartaa habka ugu wanaagsan ee aad ku cuni karto CBD.
Saliidaha CBD si loola dagaallamo walwalka
Isticmaalayaasha CBD sidoo kale waxay jecel yihiin saliidaha CBD si ay uga yareeyaan buuqa iyo welwelka. Waxaad isticmaali kartaa saliida CBD luuqadle ku cun adigoo ku ridaya carrabkaaga hoostiisa. Saameynta habka isticmaalkaani waa mid deg deg ah maxaa yeelay cannabidiol wuxuu si toos ah ugu milmay socodka dhiiggaaga.
Tusaale ahaan, waxaad cuni kartaa saliidda CBD laba jeer maalintii inta lagu jiro maalinta iyo fiidka dambe. Kuwa bilawga ah, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho nooc ka hooseeya qiyaasta sida 25mg oo ah wax soo saarka CBD markaad walwal qabto. Haddii aad la kulanto xanuun daba dheeraada, waxaad isticmaali kartaa qadar sare oo ah 50mg ilaa 100mg oo saliid CBD ah si aad xanuunka uga nafiso.
CBD uumi baxa daaweynta walwalka
Haddii aad rabto inaad dareento saameynta cannabidiol isla markiiba, waxaad isticmaali kartaa uumiyeyaasha si aad u neefsatid CBD. Waxaa jira THC- iyo uumi-bixiyeyaasha hooseeya ee CBD oo kuu oggolaanaya inaad ku cunto microdoses laba jeer maalintii. Dadka qaba xanuunka daba dheeraada, waxaad neefsan kartaa noocyada kala duwan ee THC iyo CBD-hodanka ku ah.
Si kastaba ha noqotee, dadka qaar waxay ka walaacsan yihiin neefsashada CBD ee uumiga, gaar ahaan gariiradda kuleylka iyo kiimikooyinka ku jira tan adhigaAlaabta.
Cannabidiol ama CBD waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu yareeyo buuqa, walwalka iyo xanuunka daba dheeraada. Maalmahan waxaa jira badeecooyin CBD ah oo aad ku cuni kartid siyaabo kala duwan. Haddii aad dareemeyso culeys iyo walaac ku saabsan cudurkan faafa ee 'Covid-19', waxaad isticmaali kartaa cunnooyinka CBD, saliidaha CBD, ama uumiga CBD.
Ilaha waxaa ka mid ah NativeNewsOnline (EN), Maalgeliyeyaasha Waxqabadka (EN), WFXG (EN)
cabsiCBDsaliid cbdtaajFayras CoronaCovid-19caafimaadka
Unilever waxay baareysaa booska xashiishadda mid ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya Talaadadii ay soo saartay CBD ...
Xiisaha maalgashadayaashu wuxuu u wareegayaa shirkado waaweyn oo yaryar, shirkado awood badan leh. Sababta oo ah…
Kim Kardashian waxay ku bedelaysaa daawooyinkeeda sida Xanax oo loogu talagay saliida CBD isla markaana dib uma laabanayso
Kim Kardashian waxay ku badashay daawada laguu qoro saliida CBD dibna uma laabaneyso. Waa…